सुनको बिलमा क्यारेट उल्लेख छैन ? गुणस्तरमा गडबडी हुन सक्छ, पढ्नुहोस्::Nepal's Online News Portal
सुनको बिलमा क्यारेट उल्लेख छैन ? गुणस्तरमा गडबडी हुन सक्छ, पढ्नुहोस्
असोज २७/ चाडपर्वहरुमा केही नयाँ गरगहना जोड्ने परम्परा छ । दशैं तिहारमा सुन पसलहरुमा निकै भीडभाड लाग्छ । र, यस्तो बेलामा सुन खरिद गर्दा ठगिन सक्ने सम्भावना पनि अत्यधिक हुन्छ ।